CWP: Dib-u-eegis faahfaahsan oo ku saabsan Guddi-hoosaadka Xorta ah ee loogu talagalay martigelinta Webka | Laga soo bilaabo Linux
CWP: Dib u eegis faahfaahsan oo ku saabsan Gudiga Xakamaynta Bilaashka ah ee Marti gelinta Webka
Kadib maqaalkeenii hore ee ku saabsan «CWP» iyo kuwa kale «Paneles de Control» waayo, «Web Hosting» loo yaqaan "CWP (CentOS Web Panel): Guddi Xakameyn bilaash ah oo loogu talagalay maareynta webka", tan waxaan si qoto dheer ula macaamili doonnaa, taas oo ah, waxaan sameyn doonaa dib u eegis faahfaahsan oo ku saabsan Guddi Xakameyn Bilaash ah oo loogu talagalay martigelinta Webka loo yaqaan sida «CWP», sidoo kale loo yeedhay «CentOS (Control) Web Panel».
Xusuuso taas «CentOS (Control) Web Panel» sida kuwa kale «Paneles de Control» noo jira fududee waxtarka iyo maareynta wax ku oolka ah ee goobaheena maamul ee Server kasta oo la maamulo. Iyo in gaar ahaan, «CWP» waa a Software bilaash ah loogu talagalay maamulka dhakhsaha iyo fudud ee «Servidores (Dedicados y VPS)» (kaliya waxaa leh CentOS), iyada oo looga dan leeyahay yareynta dadaalka shaqooyinka adag qaarkood, iyo faa'iidooyin kale oo badan.
Dib-u-eegista xaadirka ah ee dalabka la yiri, waa in la ogaadaa in Websaydhka Rasmiga ah ee CWP hadda waxaa jira xiriiriye la heli karo oo lagu tijaabiyo iyada oo loo marayo a Nidaamka Shabakada Demo. kaas oo lagu heli karo iyadoo loo eegayo xuduudaha soo socda:
xididka / maamulka Soo galida Gudida
Soo Gal Aan SSL ahayn: https://79.137.25.230:2031
Soo Galitaanka Isticmaalaha Cusub ee Isticmaalaha Cusub (Youtube Video)
Soo Gal Aan SSL ahayn: http://demo1.centos-webpanel.com:2082
Soo gal SSL: https://79.137.25.230:2083
Si kastaba ha noqotee, dib u eegistayada waxaan u adeegsan doonnaa 3.20 version ee rakibo dhab ah oo shaqeynaya «Control Web Panel».
1 Xakamaynta Gudiga Webka
1.1.1 Dejinta CWP
1.1.2 Maamulka faylka
1.1.4 Adeegyada SQL
1.1.5 Xisaabaadka E-maylka
1.1.6 Hawlaha DNS
Xakamaynta Gudiga Webka
Marka la rakibo oo la habeeyo «CWP», oo laga furay webka si aan u galno markii ugu horeysay ee aan helno a fudud oo hufan interface interface helitaanka, meesha kaliya magaca «Usuario (Username)» iyo midda ay khusayso «Contraseña (Password)» inaad ku dhameysatid adigoo riixaya «Entrar (Login)». Sida ka muuqata sawirka hoose.
Markaad gudaha gasho, ka «CWP»waxay tustaa isticmaalaha shaashadda guud kaas oo loo yaqaan«Tablero». Taas oo muujinaysa macluumaadka soo socda asal ahaan: Xogta marinkii ugu dambeeyay, garaafyada tilmaamayaasha adeegsiga qorshaha (goobta) iyo xogta qorshaha (magaca domainka, IP-ga qeybta iyo DNS Servers ee qandaraasleyda martigelisay). midigta sare bandhigayaa macluumaad ku saabsan isticmaale gasho, luqadda loo habeeyay taas waa la beddeli karaa, iyo a badhanka dejinta in laga beddelo mawduucyada interface, haddii la heli karo.
Waxayna siinaysaa marin u helida qaybaha kale ee Nidaamka kuwaas oo kala ah:
Oo ay ku jiraan qaybaha soo socda:
Shil nidaamka faylka ah
Tus habsocodka Mysql
Tifatiraha Aaga DNS
Maamulaha faylka EXtplorer
Kaas oo ay ku jiraan xulashooyinka soo socda:
Eeg liiska safka
Sidoo kale dhamaadka baarka bidix ee bidix waxay ina tusaysaa fursadaha soo socda:
Isticmaalka booska diskiga
Sida ka muuqata sawirrada soo socda:
Dejinta CWP iyo Maareynta Faylka
Xisaabaadka Emailka iyo Waxyaabaha DNS
Plugins iyo Settings
Sidaad u bogi karto «CWP»waa Software Bilaash ah oo dhameystiran kaas oo dabooli kara inta badan baahiyaha mid kasta maareeyaha bogga. Oo yaanan ilaawin taas «CWP» runti maahan a «Software Libre» laftiisa, maadaama aysan daboolin nooc kasta oo ka mid ah «Licencia Publica General de GNU» (GNU General License ama GNU GPL ama kaliya GPL).
Laakiin waa la wadaagi karaa, la soo dejin karaa, la rakibi karaa oo la isticmaali karaa iyada oo aan wax xaddidaad sharci ama xaddid ah lahayn, maadaama runti ma lahan liisanka nooca bilaashka ah. Mar dambe maqaallada kale, waxaan sii wadi doonnaa inaan soo bandhigno wax badan oo ka mid ah codsigan weyn. Si kastaba ha noqotee, haddii aad isticmaashay «CWP», noo soo sheeg khibradaada adigoo adeegsanaya faallooyin, si loo kobciyo aqoonta Beesha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » CWP: Dib u eegis faahfaahsan oo ku saabsan Guddiga Xakamaynta Bilaashka ah ee Marti gelinta Webka
Halkan waxaan ku dhaafayaa faallooyinkeyga, mar dambe ayaan halkaan ku dhaafiyaa oo si fiican ayaan u sharraxayaa.
hahaha ogaysiis hal abuurayaasha boggan, waxay igu eedeeyeen inaanan daabici karin magaca isticmaale kale iyo "waa dambi" hahaha dabcan waxay ii geynayaan Cana, sax?
Waan ka xumahay isticmaalaha NAZA hehehe
Ku jawaab NAZAuy
GTA: San Andreas dib u sameynta Midnimada: cusbooneysiin cusub ayaa la heli karaa
Cusbooneysiinta Firefox 69.0.3 waxaa lagu sii daayay horumarin webrender